ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက် Freedom Ceramic
300 x 600 မီလီမီတာ
600 x 600 မီလီမီတာ
600 x 1200 မီလီမီတာ
GVT / PGVT ကြွေပြားများ
800 x 1600 မီလီမီတာ
အကေြာင်း Freedom Ceramic Pvt.Ltd
ယုံကြည်မှု, အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်စောင့်ကြည့်မှန်ကြောင်းဖြစ်သည် Freedom Ceramic Pvt. Ltd. ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ကျယ်ပြန့်သောဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပေးမည်. Freedom Ceramic Pre Descided စံသတ်မှတ်ချက်များတွင်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောစံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်. အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုကျေနပ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများနှင့်ဗေဒလက္ခဏာများဖြင့်ကျယ်ပြန့်သောကြွေပြားများကိုထုတ်လုပ်သည်. ကြွေပြားများသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောအုပ်ကြွပ်များ, Freedom Ceramic သငျသညျဖုံးလွှမ်းတယ်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်သောကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ဒီဂျစ်တယ်ကြွေပြားများ၏ချောချောမွေ့မွေ့မျက်နှာပြင်ကသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူစေသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွေပြားတွေဟာအစွန်းအထင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီး install လုပ်ထားတယ်.
အိမ်များ, အပန်းဖြေစခန်းများ, ရုံးများ, သို့မဟုတ်အခြားနေရာများ, Freedom Ceramic အကယ်စင်စစ်သင့်ရဲ့အာကာသဖို့ဆွဲဆောင်မှုကြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကြွေပြားလုပ်ငန်းမှာ, Freedom Ceramic ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော entity အဖြစ်သူ့ဟာသူတည်ထောင်ခဲ့သည်.
Freedom Ceramic သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွေပြားများကိုထုတ်လုပ်ပြီး၎င်းတို့အားတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်တင်ပို့သည်.
Creative Tiles များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ R & D အဖွဲ့၏သုတေသနသည်ဒီဇိုင်းများကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်စိတ်ကူးများကိုအကောင်အထည်ဖော်ကြသည်.
Freedom Ceramic နှင့်အတူ, သင်သည် tile designs နှင့်ပုံစံများမှကုန်ဆုံးမည်မဟုတ်.
Freedom Ceramic ၏စုဆောင်းမှုတွင်ထူးခြား။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းများနှင့်အတူကြွေပြားများပါဝင်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂေဟစနစ်ဖော်ရွေသောထုတ်ကုန်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်ပတ်0န်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုလိုက်နာသည်.
ကြွေပြားများအတွက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုသောအိမ်ရှင်များ, ဆောက်လုပ်သူများနှင့် developer များနှင့်ဗိသုကာများနှင့်ဗိသုကာများနှင့်ဗိသုကာများနှင့်ဗိသုကာများနှင့်ဗိသုကာများနှင့်ဗိသုကာများနှင့်ဗိသုကာများနှင့်0င်ရောက်ခြင်းအတွက်အထင်ကြီးလေးစားခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုများတွင်ထူးခြားသော0န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့များပေးခြင်းဖြင့်ခေါင်းဆောင်မှုကိုရယူပါ.
2022 Freedom Ceramic PVT. LTD. | ဒီဇိုင်း & ကစီမံခန့်ခွဲ : LLS - INDIA